केन्टका विभिन्न कीटाणुनाशक उपकरणहरूको (डिसइन्फेक्टेन्टहरूको) बजारमा बढ्दो माग - Technology Khabar
» केन्टका विभिन्न कीटाणुनाशक उपकरणहरूको (डिसइन्फेक्टेन्टहरूको) बजारमा बढ्दो माग
ई.ओ.एल. प्रा. लि., नेपालमा केन्ट उत्पादनहरूका लागि एक मात्र आधिकारिक वितरक, सि. जी. इलेक्ट्रोनिक्स अन्तर्गतको संस्थाले समयको माग अनुसार केन्ट कीटाणुनाशक उपकरणहरू (डिसइन्फेक्टेन्टहरू) बजारमा ल्याएको छ जून अहिलेको समयमा अत्यावश्यक पनि छ र यिनीहरूको माग पनि बढ्दो छ ।
चलिरहेको कोविड–१९ महामारीमा, तपाईंको वरिपरि भएको तर सजिलै आँखाले नदेख्ने ब्याक्टेरिया र भाइरसबाट नियमित रूपमा कीटाणुशोधन गर्न जरुरी छ । अब तपाईंले उपभोग गर्नु हुने फलफूल र तरकारीहरूलाई सजिलैसँग सफा र सुरक्षित राख्नुका साथै यी स्मार्ट उपकरणहरूले तपाईंको कोठा र गाडीे भित्रको हावा पनि ताजा र स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ ।
केन्ट अटो सेनिटाइजरः
नयाँ र हातको स्पर्श विना केन्ट अटो सेनिटाइजरले तपाईंको हातहरू सेनिटाइज गर्नुहोस् । यो उपकरणमा स्मार्ट इन्बिल्ट इन्फ्रारेड सेन्सर सुसज्जित छ जसले तपाईंको हात डिस्पेंसरको मुनि राख्दा सेन्स गर्दछ । केन्ट अटो सेनिटाइजरमा १२ लिटरको उच्च स्टोरेज क्षमता छ जसको ट्याङ्की सजिलै हटाउन सकिन्छ साथै सजिलै रिफिलिंग र उपकरणको सरसफाइई गर्न सकिने भएकोले यसमा स्वच्छता कायम गर्न सकिन्छ ।
केन्ट काउन्टर टप भेजिटेबल कीटाणुनाशक उपकरणः
यस उपकरणले साग–सब्जी , फलफूल र मासुबाट कीटनाशक, ब्याक्टेरिया र भाइरसहरू हटाउँदछ । केन्ट टेबल शीर्ष भेजिटेबल कीटाणुनाशक उपकरणबाट तरकारी र फलफूलहरू उपभोगका लागि सुरक्षित बनाउनुहोस ्। यसमा रासायनिक रहित ओजोन टेक्नोलोजी छ जसले हानिकारक कीटनाशक, रसायनहरू आदि हटाएर तरकारी र फलफूलहरू कीटाणु रहित गर्दछ । यसले ब्याक्टेरिया, भाइरस र अन्य कीटाणुहरूको हटाउने कुरा सुनिश्चित गर्दछ जुन बहु हात विनिमयको परिणाम स्वरूप ट्रान्सफर हुन सक्छ र खानालाई उपभोगका लागि सुरक्षित बनाउँदछ । यसले तपाईंको परिवारलाई स्वस्थ र स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ ।
केन्ट ओजोन एयर डिसइन्फेक्टेन्टहरूः
क्रान्तिकारी ओजोन कीटाणुशोधन टेक्नोलोजीको साथ तपाईको कोठा तथा गाडीको हावालाई ब्याक्टेरियाहरू र भाइरसहरूबाट हटाउन सक्नुहुन्छ । यो उपकरण प्रयोगकर्ता–मैत्री भएकाले केन्ट ओजोन एयर डिसइन्फेक्टन्टहरू दुबै व्यक्तिगत र साना व्यावसायिक स्थानहरूको लागि सबै भन्दा उपयुक्त उपकरणहरू हुन् । तपाईंको कोठा तथा गाडीको हावा ब्याक्टेरियाहरू र भाइरसहरूबाट मुक्त राख्न केन्ट ओजोन एयर डिसइन्फेक्टेन्टको विश्वास गर्नुहोस् । यस यन्त्रले शक्तिशाली ओजोन ग्यास छोड्ने गर्दछ जसले तपाईंको कोठा तथा गाडीको हावामा रहेको ब्याक्टेरिया, भाइरस, फङ्खी र अन्य रोगजनक कणहरुलाई हटाउन मद्दत गर्दछ ।
कीटाणुनाशक उपकरणहरूको अतिरिक्त, केन्टका पानी प्रशोधक (प्युरिफायर), एयर प्युरिफायर र स्मार्ट किचन उपकरणहरू पनि उपलब्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
एप्पलले ल्यायो तीनवटा नयाँ आइफोन, सबैभन्दा महंगो ‘आइफोन एक्स’
चिनियाँ एप्समा प्रतिबन्धपछि भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको वेइबो एकाउन्ट बन्द
सञ्चार मन्त्री डा. खतिवडाको दाबी- स्याटेलाइट खरिद पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी ढंगले अघि बढ्छ